၀၆၆၉ ၀၆၆၉-၈၉၈၉၁၀၈၀ harry@enuomold.com
Plastic Moulding များ
Dongguan Enuo mold Co. , Ltd သည် Hong Kong BHD Group ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပြီးပလပ်စတစ်မှိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးသည်၎င်းတို့၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ CNC စက်၊ ရှေ့ပြေးထုတ်ကုန် R&D၊ စစ်ဆေးရေးတပ်ဆင်မှု
တီထွင်ဖန်တီးမှု5မှတ်ချက်များ ဇွန်လ ၇ ရက်
Wow, ယောက်ျားတွေ! မှိုသစ်တင်ပို့ချိန် ဟား၊ ငါတို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကောင်မလေးဘယ်လောက်ပျော်နေလဲကြည့်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီပုံကိုမတင်ခင်ငါ့နှလုံးသားထဲမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အကျပ်ရိုက်မှုတစ်ခု။ “ linkIn” အဆက်အသွယ်များစွာပိုင်ဆိုင်သောသူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်အားကြင်နာစွာအကြံပေးရန်သုံးသည် - ဟယ်ရီ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့မတ်တပ်ရပ်ဖို့ဖိတ်တာမကောင်းပါဘူး။
မှိုစမ်းသပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းပုံသွင်းမှုချွတ်ယွင်းမှုများသည်သေချာသောခန့်မှန်းချက်မရှိဘဲမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကောင်းသောမှိုစမ်းသပ်အင်ဂျင်နီယာသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆေးထိုးစက်တွင်အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှအကြောင်းပြချက်ကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ချနိုင်ရန်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသင့်သည်။ ဒီမှာငါတို့အဖွဲ့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုစုဆောင်းတယ်။
ချစ်ခင်ရပါသောစာဖတ်သူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးတွင်ပုံမပြယ်မီမှိုကိုထိန်းချုပ်ရန်ဒီဇိုင်းအပိုင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်းကောင်းရှိဖို့ကအဓိကကျပါတယ်။ အတိုင်းအတာနှင့်အညီချိန်ညှိရန်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများစွာရှိသည်။
ငါတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးက work-shop tooling မှာပိုလှတယ်လို့မင်းမထင်ဘူးလား
HaHa၊ ၈ နှစ်ကြာမှိုလုပ်ငန်းတွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖူးသူတစ် ဦး အတွက်ငါ "မကျေမနပ်" အများကြီးရှိသည်၊ ပထမတစ်ခုကငါတို့ဘေးမှာကောင်မလေးတွေများလွန်းသည် ... အလှအပအတွက်တကယ်မသင့်တော်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေများလွန်းတာကြောင့်ကောင်းကင်မှာ ...
တရုတ်နိုင်ငံမှမှိုထုတ်လုပ်တင်ပို့သူတစ် ဦး အနေနှင့်ပြည်တွင်းမှိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမှိုတင်ပို့မှုစျေးနှုန်းများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကထက်သိသိသာသာမြင့်မားလာသည်၊ ကွာဟချက်သည်စံမတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ The American Society of Plastic Industry (SPIAN-102-78) မှိုကိုအမျိုးအစားငါးမျိုးခွဲထားသည်။ ဤမှိုအမျိုးအစားငါးမျိုးရှိသည်။ ...
၁၊ ပုံစံမပြောင်းလဲမီဒီဇိုင်းသည် auto air & water tank ထုတ်ကုန်ပလတ်စတစ်မှိုအကြောင်းအဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်၊ ဤအစိတ်အပိုင်းများကို PA6 (PA66) + GF ဖြင့်ပုံသွင်းထားသောကြောင့်ပုံမှန်အမျိုးအစားထက်ပိုခက်ခဲသည်။ (၃၀-၃၅%) ဒြပ်ပေါင်းနှင့်ဤ mater မျိုး ...
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်၊ မှိုများပို့ဆောင်ခြင်းလပေါင်းများစွာအလုပ်ကြိုးစားပြီးနောက်အိမ်ထောင်စု (အစားအစာသေတ္တာများ) မှိုများကိုဖောက်သည်ထံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် (ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိ၍ ဖောက်သည်များသည်အစိတ်အပိုင်းအသွင်အပြင်အတွက်အဆင့်မြင့်လိုအပ်ချက်ရှိသည်။ ငါတို့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကအောင်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။
1. မှိုစမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်? ပုံသွင်းထားသောချို့ယွင်းချက်အများစုသည်ထုတ်ကုန်ကိုပလတ်စတစ်နှင့်ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြောင်းမဲ့ပေါင်းမှိုပုံစံများအပါအ ၀ င်မသင့်လျော်သောမှိုဒီဇိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အအေး / ပူအပြေးသမားစနစ်ဒီဇိုင်း၊ ထိုးဆေးအမျိုးအစား၊ အနေအထားနှင့်အရွယ်အစား ...
ပူအိုက်သောနွေ ဦး+ သစ်တောသည်ပျော်စရာအတွက်မျောပါနေသည်။
-Nankunshan Hot Spring Health Valley သို့ခရီးသည်ရက်ပေါင်းများစွာရွာသွန်းပြီးနွေ ဦး ကုန်ဆုံးသည်ကိုငါမသိ။ ရာသီဥတုသာယာသည်နှင့်နွေရာသီရောက်လာသည်မှာကြာမြင့်သည်ကိုငါသဘောပေါက်သည်။ အချိန်ဆိုတာငါတို့ရဲ့အမှတ်မထင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်၊ ၂၀၁၉ ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုဇွန်လမှာပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီ။
CNC Lathing စက်
Big Size မှို
အော်တို Grille Trim
Add: No.170, Huancun Road, Jinxiaotang Village, Fenggang town, Dongguan city, Guangdong China
အ | Air Tank & Water Tank များ အ | ပရိတ်သတ်/Shroud အ | စားသုံးမှု Manifold အ | အင်ဂျင်အဖုံး အ | အော်တို Sunroof အ | အော်တိုဘန်ပါ အ | အော်တို Grille ချုံ့ |